ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှု - ၂၀၀၀-၂၀၁၇ သုတေသနလမ်းကြောင်းများကိုစနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ (2000) - သင့်တွင် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
စာရေးသူ: Alexandraki, Kyriaki; Stavropoulos, Vasileios; အန်ဒါဆင်, အမ်မာ; Latifi, မိုဟာမက်ဆိုးကျိုး; ဂိုမက်ဇ, Rapson
source: လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, Volume 14, နံပါတ် 1, မတ်လ 2018, စစ။ 47-58 (12)
ထုတ်ဝေသူ: Bentham သိပ္ပံထုတ်ဝေသူများ
နောက်ခံသမိုင်း: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (PU) ကလူရှင်းလင်းစွာထိတွေ့နဲ့မြင်နိုင်လိင်အင်္ဂါနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံဖျော်ဖြေထားတဲ့အတွက်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုများ၏ပုံစံအတွက်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများများ၏မြင်ကွင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ PU ၏ပျံ့နှံ့မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းပစ္စည်းများ၏ကျယ်ပြန့်ရရှိမှုမှစွပ်စွဲ, မြီးကောင်ပေါက်အကြားသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။
Objective: ဤစနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလယ်ပြင်၌သုတေသနအကျိုးစီးပွား map ဖို့နဲ့ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာရလဒ်များကိုသုတေသနအာရုံစိုက်များ၏နယ်မြေများမှပေါ်ထွက်လာကြပါပြီရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
နည်းလမ်းများဤရည်ရွယ်ချက်ဖြေရှင်းရန်: က) PRISMA လမ်းညွှန်ချက်များမွေးစားနေကြတယ်နှင့်; အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အပြုအမူတွေ၏နားလည်မှုနှစ်ခုကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောမော်ဒယ်များများ၏ပေါင်းစည်းမှုကနေဆင်းသက်လာခ) တစ်ဦး Integrated စိတ်ကူး () တွေ့ရှိချက်များပေါင်းစပ်လမ်းပြစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်များ: စုစုပေါင်း 57 လေ့လာမှုများပစ္စုပ္ပန်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်သို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မှ PU နှင့်ဆက်စပ်သော, တစ်ဦးချင်းဆက်စပ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအချက်များသို့ခွဲခြား / conceptualized ခဲ့ကြသည်။ ဤအခြေအနေ၌ထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးရေး, သားကောင်, စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုအဖြစ်တစ်ဦးချင်းဆက်စပ်နေသောအချက်များ, ဆယ်ကျော်သက်မှ PU နှင့်အတူအရေးပါသောဆက်ဆံရေးသရုပ်ပြအဓိကအားယစ်သုတေသနအကျိုးစီးပွားရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။
နိဂုံး: ရလဒ်များ Contextual နှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များပေါ်တွင်ပိုပြီးသုတေသနအာရုံစိုက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှ PU ၏နားလည်မှုအဆင့်တိုးတက်စေရန်နှင့်အလားအလာအနာဂတ်သုတေသနကိုလမ်းပြနိုင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖြစ်ရပ်ဆန်း၏နားလည်မှုပိုမိုဘက်စုံအယူအဆရေးရာမူဘောင်အကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
keywords: ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု; လှုပ်ရှားမှုအချက်များ; လူငယ်ဘဝ; Contextual အချက်များ; တစ်ဦးချင်းစီအချက်များ; စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ချက်; prisma
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ: မတ်လ 1, 2018
3.2 ။ ဗိုလ်မှူး / မူလတန်းသုတေသန Trends
ဆုံးသုတေသနပြု variable တွေကို (အနည်းဆုံး6လေ့လာမှုများအတွက်အကျိုးစီးပွား variable တွေကိုအဖြစ်ပေါ်ထွန်း) ကိုသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မှ PU စပ်လျဉ်းမှာဖျောပွထားပါနှင့်အဓိကစာပေကောက်ချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ တွေ့ရှိချက်များ၏အကျဉ်းချုပ်လေ့လာမှုများတစ်ဦးချင်း, Contextual နှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းရင်းများကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်အနည်းဆုံးသုတေသနပြုမြားအမြားဆုံးကနေ variable တွေကိုချဉ်းကပ်၏သုံး superordinate အုပ်စုများအောက်မှာဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
3.3 ။ တစ်ဦးချင်းဆက်စပ်အချက်များ
3.3.1 ။ ဇီဝဗေဒလိင်
ဇီဝဗေဒလိင်ပစ္စုပ္ပန်စနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်းအဆိုပါ 46 လေ့လာမှုများထဲက 57 အတွက်သုတေသန variable ကိုအဖြစ်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းများတွင်တွေ့ရှိချက်အတွေ့အကြုံရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းနှင့်စပ်လျဉ်း, ကျား, မကွဲပြားမှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သင်တန်းကျော်တိုးမြှင့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညစ်ညမ်းစားသုံးမှုသတင်းပို့ယောက်ျားအပေါ်ဆုံနှင့်; အထီးအဘို့မိတ်ဆွေတစ်ဦး [7, 10, 11, 25-32] နှင့်အတူတစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏မြင့်မားသောအခွင့်အလမ်းတွေကို။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်ကျား-related ကွဲပြားခြားနားမှုအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းပစ္စည်းရန်ထိတွေ့မှုနှင့် sexting အခြေအနေတွင် (sexting လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လိုက်စားအကြောင်းအရာဖလှယ်ဖြစ်ပါတယ်, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအတွက် porn နှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းအသုံးပြုမှုပတ်သတ်ပြီးပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးခဲ့ကြသည် မှတဆင့် စမတ်ဖုန်း, အင်တာနက်, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်များ) [33, 34] ။ သို့သော်ယောက်ျားကပိုအမျိုးသမီးထက်လိင်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာရှာပေးအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပေမယ့်အခြားလေ့လာမှုများ  ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား, အထီး web ပေါ်မှာညစ်ညမ်းပစ္စည်းရှာအမျိုးသမီးထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူနှင့်တကွ, အလတ်စားနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားမှုညွှန်ပြ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းစားသုံးတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးငယ်များ  အကြားပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါထင်ရှား passive မလိုချင်တဲ့လိင်အပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအချို့သက်ရောက်မှုနှင့်တကွ, passive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ပိုများသောမကြာသေးမီစာပေမီဒီယာသက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုတည်ရှိပေမယ်ဒါ့အပြင်ကွဲပြားခြားနားယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါမသာကြောင်းယူဆ  ချဉ်းကပ်ဖို့ differential ကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်များ၏အခြေအနေတွင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏စားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုအနက်ကိုဘော်ပြလေ့ရှိတယ်, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို orientation ကို  စပ်လျဉ်း။
လိင်ဆီသို့ 3.3.2 သဘောထားများကို
ယေဘုယျအား 21 လေ့လာမှုများမှ PU စပ်လျဉ်းလိင်ဆီသို့ဦးတည်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ညစ်ညမ်းပစ္စည်းလောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်အဓိကအားမှ PU  နှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှသိသိသာသာသက်ရောက်မှု [7, 37, 38] စဉ်းစားတစ်ဦးကိုရိပ်မိပုံမှန်သဘောထားကိုချိတ်ဆက်ပြီ။ တရုတ်သုံးပြီးအထူးသ longitudinal နှင့် Cross-Section လေ့လာမှုများ,
အမေရိကန်, ထိုင်ဝမ်နှင့်ဒတ်ခ်ျနမူနာညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့မှုကပိုအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ကျူးလွန်သူအမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်အကွာအဝေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက်နောက်ပိုင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက် [7, 30, 39-41] ခန့်မှန်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကြောင်းလိုင်းများတွင် Haggstrom-Nordin, Hanson, Hanson နှင့် Tyden  ဆွီဒင်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လူဦးရေနဲ့အလုပ်လုပ်, အထီးမြင့်မားသောညစ်ညမ်းစားသုံးသူ fantasize ဖို့, ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်၌ထင်ရှားလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ရန်, လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာမှတော်မှာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးလိင်စိတ်နိုးထအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်, ကျားမနှင့်လိင်၏သဘောတရားများနှင့်အပျက်သဘောကျားသဘောထားများ (အကြောင်းပိုမိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ယူဆချက်အစီရင်ခံကြောင်းညွှန်ပြစာပေနှင့်အတူသဘောတူဖြစ်ပေါ်လာသောဥပမာ။ ထိုကဲ့သို့သောအထူးသဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရှက်အဖြစ်ညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်အရအခွင့်အရေး features တွေ) [27, 42-44] ။
3.3.3 ။ တိုးတက်ရေး
တကျိပ်နှစ်ပါးသောလေ့လာမှုများကို (57 ထဲကပစ္စုပ္ပန်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်း) မှ PU အပြုအမူတွေအတွက်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသူတို့ကိုစပ်လျဉ်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ နိဂုံးချုပ်, တွေ့ရှိချက် pubertal အချိန်ကိုက်စောစောရငျ့နှင့်အထက်အသက်အရွယ်ပိုမိုမြင့်မားမှ PU [7, 13, 45, 46] မှဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အပြန်အလှန်အားကြည့်ရှုညစ်ညမ်းတန်ဖိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်တွေ့ရှိထားသည်နှင့်ပိုပြီးတိတိကျကျသူတို့အားဘာသာတရားဆီသို့ဦးတည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်  ကာလအတွင်း။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ကြည့်ရှုညစ်ညမ်း  ကျား၏လွတ်လပ်သော, အချိန်ကျော်မြီးကောင်ပေါက် '' ယာနျဘာသာတရားကိုလျှော့ချတစ် secularizing အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ ဤအခြေအနေ၌အပြုသဘောလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုကနဦးမှ PU ၏အဆင့်နှင့်တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်နမူနာအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုက၎င်း၏နှုန်းမှာ  မှဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
3.3.4 ။ သားကောင်
Interpersonal သားကောင်နှင့်နှောင့်ယှက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှ PU စပ်လျဉ်း၌ထင်ရှားသိသာသောဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ 11 လေ့လာမှုများအတွက်ကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အကြမ်းဖက်ရန် exposure / ညစ်ညမ်းလျော့နည်းသွားစေမှာ-အန္တရာယ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်မြီးကောင်ပေါက်တို့တွင်ဘုံပါပြီပုံနှင့်, အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပါက  သားကောင်တစ်သမိုင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ အထူးသ Ybarra နှင့်မစ်ချယ်ရဲ့လေ့လာမှု  အခြားလေ့လာမှုများ  ညစ်ညမ်းဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်အော့ဖ်လိုင်းသားကောင်အကြားတိကျတဲ့ link ကိုမီးမောင်းထိုးပြနေချိန်တွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်စေ), ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်ကိုပိုပြီးအတွေ့အကြုံများအစီရင်ခံရန်တော်မှာပါ။ ကောက်ချက်ချ စိတ်ဝင်စားစရာသူတို့တစ်နောက်ပိုင်းတွင်သုတေသနအတွက် Ybarra နှင့်မစ်ချယ်  သူတို့ယခင်ကမှ PU ထိတွေ့ခဲ့ပြီးမှ 10-15 နှစ်အကြားဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ဦးချင်းစီ (ကျား, မများ၏လွတ်လပ်သော) လိင်ကရန်လိုအပြုအမူတွေကိုသတင်းပို့ဖို့ပိုရှိုခဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဤရလဒ်သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူတွေ (9) ပြမှသိသိသာသာပိုပြီးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, PU အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုပတ်သတ်ပြီးအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုညွှန်ပြပေးသောယခင်လေ့လာမှုများမှဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအခြားလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုများ၏စိတ်အားထက်သန်  ယေဘုယျအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မထင်ခဲ့ဘူးတဲ့အသင်းအဖွဲ့ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဤအနေသော်လည်းအခြားတွေ့ရှိချက် [ခြုံငုံ, PU မှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားပိုမိုမြင့်မားမူအကျင့်ပြဿနာများ, ပိုမိုမြင့်မားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်သားကောင်နှင့်သိသိသာသာညစ်ညမ်းပုံမှန်ကြည့်ရှုသူနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုယောက်ျားလေးများ '' ကျူးလွန်နှင့်အတူအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်ကျူးလွန်နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ 14, 27]
3.3.5 ။ စိတ်ကျန်းမာရေးလက်ခဏာ
(က Eleven လေ့လာမှုများဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှ PU မှဆက်စပ်ခံရဖို့စိတ်ကျန်းမာရေး features တွေ / ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် / သို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာထင်ရှားအဖြစ်မူကွဲညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အလယ်အလတ်အညီစိတ်ကျန်းမာရေး status ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဥပမာ။ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်း) [11, 49] ။ နိဂုံးချုပ်များနှင့်ဆင်းရဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်မှ PU  အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အတည်ပြုမဟုတ်အချို့သောလေ့လာမှုတွေရှိနေသော်လည်းတွေ့ရှိချက်များကျယ်ပြန့်အများစု (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားမှ PU စိတ်ခံစားမှုပိုမိုမြင့်မားမှပြန်ပြောပြလေ့ရှိတယ်ကြောင်းပေါ်ပါတယ်ဥပမာ။ စိတ်ကျရောဂါ) နှင့်အမူအကျင့်ပြဿနာများ [10, 14, 34] ။ ဤအခြေအနေ၌ Ybarra နှင့် Mitchell  ၏လေ့လာမှုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရှာဖွေနေသူအော့ဖ်လိုင်းနဲ့ Non-ရှာဖွေသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Tsitsika et al။  ပေမယ့်မကြာခဏအင်တာနက်ကိုမှ PU သိသိသာသာခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှုမဟုတ်ခဲ့, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ထိုကွောငျ့, သူမ (အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်) မှ PU တစ်အလားအလာစံတန်ဖိုးပုံစံဆိုလို။ ကြောင်းလိုင်း, Luder အတွက် et al။  မြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုနှင့်အတူတင်ပြယောက်ျားပေါင်းမှ PU နှင့်စိတ်ကျရောဂါသရုပ်အကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကျားမ-related မူကွဲအကြံပြုသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးအချက်များ adolescentboys  အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြကြောင်းထုတ်ဖော် longitudinal လေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူခဲ့သည်။
3.3.6 ။ Sensation ရှာအံ့သောငှါ
အာရုံခံစားမှုရှာသောစိတ်သဘောထားများသည်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိ PU နှင့်စပ်လျဉ်း။ ထပ်တလဲလဲဆန်းစစ်ခဲ့ပုံရသည် [၄၊ ၁၃၊ ၃၄၊ ၄၆၊ ၅၂၊ ၅၃] ။ သို့သော်ရလဒ်များ [4, 13] ကိုအတည်ပြုအချို့လေ့လာမှုများနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာကြံနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် PU  အကြားအသင်းအဖွဲ့များကိုမဆိုတိကျတဲ့ပုံစံများကိုအတည်ပြုမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုလေ့လာမှုများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုပါပြီ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလေ့လာမှုအများစုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်အာရုံခံစားမှုကိုရှာဖွေနေသည့်အာရုံနှင့် PU အကြားဆက်နွယ်မှုကိုအတည်ပြုရန် ဦး တည်သည်။ အထူးသဖြင့်ဘရွန်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလှုံ့ဆော်ရန်အလွန်လိုအပ်သောဆယ်ကျော်သက်များသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေရန်ပိုများကြောင်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ကြောင်းလိုင်းအတွက် Luder et al။  ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖျောထုတျတဲ့သူနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း, အာရုံခံစားမှုရှာဖွေနေသူဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပင်Ševčikova, et al။  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုညစ်ညမ်းစေရန်မကြာခဏထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးခန့်မှန်းဖြစ်ရှာကြံအာရုံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး  ရှာကြံအာရုံခံစားမှုကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
3.3.7 ။ ယာနျဘာသာတရားကို
ယာနျဘာသာတရားကို၏အဆင့်မြင့် [9, 47, 55, 56] မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မှ PU ၏အောက်ခြေအဆင့်နဲ့ဆက်စပ်ပါပြီ။ လေ့လာရေးဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများမှအားနည်းဆက်ဆံမှု, ညစ်ညမ်းသည်အသုံးပြုသူများ  အကြားတွင်ပိုပြီးပျံ့နှံ့ဖြစ်လေ့ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာဘာသာရေးသံသယ  တိုးမြှင့်ပြသနေစဉ်ဤအခြေအနေ၌ ပို. မကြာခဏညစ်ညမ်းကြည့်, ဘာသာရေးယုံကြည်ခြင်း, ဆုတောင်းပဌနာကြိမ်နှုန်းကို၎င်း, ဘုရားသခင်၏မှရိပ်မိရငျးနှီးမှု၏အရေးပါမှုကိုဘာသာရေးဝန်ဆောင်မှုတက်ရောက်သူလျော့ချဖို့ထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများမသက်ဆိုင်ကျား၏ကျင်းပရန်နှင့်ထွန်းသစ်စလူကြီးများ  နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ သည်အခြားလေ့လာမှုများလည်းဘာသာရေးတက်ရောက်သူလည်းပိုမိုမြင့်မားမှ PU နှင့်အတူအားနည်းနေခြင်းကအတည်ပြုခဲ့ကြစဉ်သို့သော်သူတို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးများ  အကြား, ဘာသာရေးတက်ရောက်သူ၏အဆင့်မြင့်မှာအားနည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူနိမ့်ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်မှ PU အကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များမှပူးတွဲမှုမြီးကောင်ပေါက်  ကြားတွင်ညစ်ညမ်းတို့၏စားသုံးမှုအောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုမြီးကောင်ပေါက်မယ့်ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်မှာဘာသာရေးကွဲပြားခြားနားမှုပါဝင်နိုင်သည့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်ကွာခြားကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဤ (ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရေးအုပ်စုများမှဆယ်ကျော်သက်အကြံပြုခြင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ alignsဥပမာ။ ကက်သလစ်, ပရိုတက်စ, စသည်တို့ကို) ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှသည်းခံစိတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖွယ်ရှိ, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအပေါ်ခြားနားသည်။
3.3.8 ။ လူမှုဖြင့်လွှတ်ရန်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မှ PU နှင့်မြီးကောင်ပေါက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသောလူမှုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အကြားအသင်းအဖွဲ့မကြာခဏယစ်သုတေသနအာရုံစိုက်မှု  ရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ ယေဘုယျအားညစ်ညမ်းများအတွက်အင်တာနက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်  သတင်းအချက်အလက်, လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအဘို့အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူမြီးကောင်ပေါက်ကနေအများအပြားလူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ကွာခြားလေ့စေတဲ့သဘောတူညီမှုဖြစ်ရှိပုံရသည်။ အထူးသတဲ့ relational လွတ်လပ်ရေးစတိုင်တိုးလာညစ်ညမ်းစားသုံးမှု  နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ ဤ Mattebo နှင့်အတူသဘောတူ et al။  မကြာခဏဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအချိုးအစားပျှမ်းမျှနှင့် Non-မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်ရွယ်တူတွေနဲ့ပိုပြီးကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေသတင်းပေးပို့ကြောင်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ပတ်သတ်ပြီးအတွက် Liberation တစ်ဦးစိတ်သဘောထားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်  ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားမှ PU မှဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
3.4 ။ Activity ကို Related အချက်များ
3.4.1 ။ အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုလက်ခဏာ
အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်းအဆိုပါ 15 လေ့လာမှုများထဲက 57 အတွက်သုတေသနပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား  အွန်လိုင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်သားကောင်ထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဘုံဝိသေသလက္ခဏာများပိုမိုမြင့်မားအွန်လိုင်းဂိမ်းအသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်, အင်တာနက်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်သရုပ်နှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက် Self-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုတို့ပါဝင်သည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤသည် Doornward အားဖြင့်ကောက်ယူသုတေသနနှင့်အတူအလားအလာတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် et al။  လည်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက် '' နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိုနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ social networking site များသုံးစွဲဖို့လေ့ကြောင်း။ ညွှန်ပြပေးသော ဆနျ့ကငျြကတခြားလေ့လာမှုတွေမိဘတွေနဲ့အတူဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပြဿနာဆက်ဆံရေးအွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရကြောင်းအကြံပြုသည်။ သို့သော်မိမိဆန္ဒအလျောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့အွန်လိုင်းသိသိသာသာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်  အကြားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှု Mattebo အားဖြင့်ကောက်ယူ et al။  (ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောယောက်ျား, ပိုပြီးလိင်ကြုံတွေ့ခံရဖို့တော်မှာကြောင်းတွေ့နှင့်အွန်လိုင်းကိုပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းဖို့ဆိုလိုသည်မှာ။ , 10 ဆက်တိုက်နာရီ, အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်ထက်ပို), မကျန်းမာလူနေမှုရှိခြင်း (ဥပမာ။ ညစ်ညမ်း၏အနိမ့် / ပျှမ်းမျှစားသုံးသူများဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, အဝလွန် / အဝလွန်ခြင်း) ။
3.4.2 ။ မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အပြုအမူ
PU ပတ်သတ်ပြီးအတွက်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားလုံးလေ့လာမှုများသိသိသာသာရလဒ်များကိုအစီရင်ခံအတူ 11 လေ့လာမှုများအတွက်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ Doornward အားဖြင့်ကောက်ယူအဆိုပါလေ့လာမှု, et al။ [31, 32] ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအတူဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ 'စိတ်ကျရောဂါနှင့်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်၏ Self-လေးစားမှု, မြင့်မားသောအဆင့်နိမ့်အဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအခြေအနေ၌အခြားသောလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့် social networking site များကိုပိုမိုသက်တူရွယ်တူခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့နှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းပါဝင်ပတ်သက်မှု [31, 32] စဉ်းစား သာ. ကွီးမွတျအတှေ့အကွုံညွှန်ပြခဲ့ကြသည်ယောက်ျားလေးများသူပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုသရုပ်ပြသူကိုယောက်ျားလေးများတစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ရှိသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံတဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တော်မှာ။ ဒီအပြင်, သီးခြားမိဘများနှင့်အတူနေထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းတဲ့အပြုသဘောအမြင်ရှိခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်  ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ ခွဲခြား. မရဘဲချိတ်ဆက်ပြီ။
3.4.3 ။ ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအမျိုးအစားများ
PU စပ်လျဉ်းညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့များကိုညွှန်း, 10 လေ့လာမှုများအတွက်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ အထူးသ,  တို့ကကောက်ယူသုတေသနအငယ်မြီးကောင်ပေါက် '' ကိုပိုမိုမကြာခဏချစ်ခင်-ရေးရာ, ကြီးစိုး-Theme နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများရေးရာအကြောင်းအရာထိတွေ့ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီဆန့်ကျင်သည့်အတိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူအဟောင်းများမြီးကောင်ပေါက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမကြာခဏကြီးစိုး-ရေးရာညစ်ညမ်းရွေးချယ်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ကြောင်းလိုင်း, Hald အတွက် et al။  ကိုလောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏အကြောင်းအရာနှင့်မြီးကောင်ပေါက်နေဖြင့်ထင်ရှားသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားအလယ်အလတ်, သေးသိသိသာသာဆက်ဆံရေးရှိကွောငျးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အကြမ်းဖက် / စော်ကားသောညစ်ညမ်းများအတွက် preference ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုယူခဲ့တဲ့ယောက်ျားတို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ရောင်း / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြုနှင့်အရက်၏မြင့်မားသောပမာဏကိုစားသုံးရန်တော်မှာခဲ့သူမိတ်ဆွေများကရှိခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပင်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပေမယ့်, ရောင်း / လိင်-related န်ဆောင်မှုကိုဝယ်ဖို့နဲ့ [42, 48] ဆေးလိပ်သောက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့သူမိတ်ဆွေများကိုရှိသည်ဖို့, မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုယူနာမယူဘဲအကြမ်းဖက် / လျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်ညစ်ညမ်း၏စားသုံးသူရှိနသောသူအမျိုးသမီး။
3.4.4 ။ ရိုးရာ Porn
အစဉ်အလာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုမဂ္ဂဇင်းများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်စသည့်အစဉ်အလာ (အွန်လိုင်းမဟုတ်သော) မီဒီယာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အစဉ်အလာအပြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလေ့လာမှု (၇) ခုတွင်လေ့လာခဲ့ပြီး၊ အစဉ်အလာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးရန်သုတေသနစိတ်ဝင်စားမှုသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသုံးစွဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားဖွယ်ရှိသည်။ Shek & Ma  က၎င်းသည်စျေးသိပ်မကြီးသောကြိုးမဲ့အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွန်ပျူတာများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်စမတ်ဖုန်းများမှတဆင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာနှင့်အမည်မဖော်နိုင်ပါ။
3.5 ။ context Related အချက်များ
3.5.1 ။ မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ
မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ 12 လေ့လာမှုများအတွက်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ အထူးသ Weber နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ  သူတို့ရဲ့မိဘများ၏လျော့နည်းလွတ်လပ်သောအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမှတ်ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက် '' ကိုပိုမိုမကြာခဏညစ်ညမ်းလောင်လေ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒီအနိမ့်ဆက်သွယ်ရေးမှ PU အတွက်မြင့်မားလာသည်ကိုလည်းလည်းမြီးကောင်ပေါက် '' ၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်အတူဆင်းရဲတဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူတင်ပြကြောင်းထောက်ခံသောအခြားတွေ့ရှိချက်  နှင့်ကိုက်ညီသည်မိသားစုမှနိမ့်ကတိကဝတ်နည်းမိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များစုပေါင်းပြောင်းပြန်မှ PU [9, 58] နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ထားတဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာ, သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပေါ်လာပါသည်။
3.5.2 ။ ရွယ်တူချင်းယဉ်ကျေးမှု
PU စပ်လျဉ်း peer ယဉ်ကျေးမှု7လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များကိုကျားမအခန်းကဏ္ဍသဘောထားတွေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်သက်တူရွယ်တူခွင့်ပြုချက်၏အမြင်နှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်တူရွယ်တူယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှ PU [7, 31, 32] နှင့်အတူ interrelate သော။ အကြံပြု အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလိင်ဖြတ်ပြီး social networking site များ၏အသုံးပြုမှုကိုအပြုသဘောသက်တူရွယ်တူခွင့်ပြုချက်နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို [7, 31, 32] ၏သဘောထားအမြင်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ကြောင်းလိုင်းများတွင်ပေတရုနှင့် Valkenburg အားဖြင့်ကောက်ယူလေ့လာမှုများ [59, 60] အသီးသီး "လူမှုရေးသရုပ်မှန်" နှင့် "utility ကို" အဖြစ်ခေါင်းစဉ်, အဓိကအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့ထက်ချစ်ခင်နှင့်ဆက်စပ်အဖြစ်လိင်၏အယူအဆတွေကအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကို "လူမှုရေးသရုပ်မှန်" နှင့် "utility ကို" နှစ်ဦးစလုံးတိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့အဖြစ်လိင်၏အယူအဆတွေသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဆက်ဆံရေး၏ရငျးနှီးလျှော့ချညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာမကြာခဏစားသုံးမှု၏အခြေအနေတွင်အနက်နိုင်ပါသည်။ ဒီအပြင်, ရန်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ  ရွယ်တူချင်းဖိအားမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်ကိုလည်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
လေ့လာရေးပစ္စုပ္ပန်စနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှ PU ၏လယ်ပြင်တွင်သုတေသနတစ်ဦးချင်းစီ (ငါ), Contextual (ကို C) ​​နှင့်လှုပ်ရှားမှု (က) အချက်များပါဝင်သောသုံးအဓိက superordinate themes များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မူကြောင်းကိုညွှန်ပြ။ အောက်ပါနှင့်များ၏အခြေအနေတွင်နှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကို: လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (18 က) ပါဝင်သော variable တွေကိုအပေါ်အလေးပေးအတူ: (8 ငါ) ယေဘုယျအားလက်ရှိအလုပ်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှု variable တွေကိုများ၏အများစုသည်တစ်ဦးချင်းစီမှအဓိကအားဆက်စပ်အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည် အသုံးပြုသူအနည်းဆုံးလေ့လာခဲ့သူတွေကို (6 ကို C) ​​ဖြစ်ခြင်း။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မှ PU စပ်လျဉ်းတစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများသုတေသနကိုဦးတည်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်သဘောထား, နှင့် extant စာပေ (စားပွဲတင် 1) တွင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်ဆက်စပ်အချက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးကိုသိသိသာသာနိမ့်သုတေသနအာရုံစိုက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ စာပေ၌ဤဖော်ထုတ်မညီမမျှဖွယ်ရှိအနာဂတ်သုတေသနများကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
4.1 ။ တစ်ဦးချင်းဆက်စပ်အချက်များ
တစ်ဦးချင်းစီဆက်စပ်အချက်များများ၏အခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်ဇီဝလိင်, လိင်, ဖွံ့ဖြိုးရေး-related အချက်များ, သားကောင်, စိတ်ကျန်းမာရေးဝိသေသလက္ခဏာများ, အာရုံကိုရှာစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်လူမှုရေး Bond ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဦးတည်သဘောထားတွေဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှ PU ပတ်သတ်ပြီးအတွက်သုတေသနအကျိုးစီးပွားယစ်ပါပြီ။ ခြုံငုံသုံးသပ်ခုနှစ်, ရလဒ်များကို4[အထီးလူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ရန်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အနိမ့်လိုက်နာမှုရှာကြံလိင်စောစောရငျ့နှင့်အသက်, လူ့သားကောင်နှင့်နှောင့်ယှက်အဟောင်းတွေ, ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, အာရုံဆီသို့ပိုမိုလွတ်မြောက်သဘောထားတွေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားမှ PU နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့လေ့ကြောင်းညွှန်ပြ , 7, 10, 11, 13, 14, 25, 27-29, 31, 32, 34, 37, 38, 45-48, 50] ။
4.2 ။ Activity ကို Related အချက်များ
လှုပ်ရှားမှု-related အချက်များ, အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများစဉ်းစား, ဆယ်ကျော်သက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာနှင့်ရိုးရာ porn အမျိုးမျိုးသုတေသနအာရုံစိုက်မှု၏အရေးပါဆုံးသောအချိုးအစားကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကြပုံမပေါ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အွန်လိုင်းဂိမ်းအသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်, အင်တာနက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ, ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်သရုပ်နှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက် Self-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့အွန်လိုင်းအပြုသဘောမှ PU [31, 32, 49] သို့လင့်ထားသည်မှပေါ်လာပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူမြီးကောင်ပေါက်, အစောပိုင်းကနှင့်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝပတ်သတ်ပြီးခုနှစ်တွင်မှ PU [8, 31, 32] ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်။ ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာရည်ညွှန်းခုနှစ်တွင်အငယ်မြီးကောင်ပေါက် '' ကြီးစိုး-ရေးရာမှ PU  ပိုမိုနှစ်သက်ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူအဟောင်းများမြီးကောင်ပေါက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်နေတုန်း, ချစ်ခင်-ရေးရာ, ကြီးစိုး-Theme နှင့်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံမှ PU ဖို့ပိုရှိုဖြစ်ကြသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရိုးရာညစ်ညမ်းအခြေအနေတွင်၏အသုံးပြုမှုကိုရည်ညွှန်းပြီးသုတေသနအလားအလာများကြောင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏အဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ရရှိမှု [44, 58] ရန်, ငြင်းဆန်ကြပုံပေါ်ပါတယ်။
4.3 ။ context Related အချက်များ
ဆယ်ကျော်သက်မှ PU မှချည်ထားသောအခြေအနေတွင်အချက်များ, မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်သက်တူရွယ်တူယဉ်ကျေးမှုစဉ်းစား / လွှမ်းမိုးမှုသုတေသနအကျိုးစီးပွား [9, 15, 58] ကြီးစိုးခဲ့ကြသည်။ အထူးသ, မိဘများနှင့်အတူလွတ်လပ်ရေး, ဆင်းရဲတဲ့ဆက်ဆံရေးမိဘမိသားစုမှနိမ့်ကတိကဝတ်နည်းမိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်, နိမ့်မိသားစုဆက်သွယ်ရေးပိုမိုမြင့်မားမှ PU နှင့်အတူတင်ပြမြီးကောင်ပေါက်အကြားမြင့်မားလာသည်။ သက်တူရွယ်တူယဉ်ကျေးမှု, ကျားမအခန်းကဏ္ဍသဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုထောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းပတ်သတ်ပြီးများတွင်ရွယ်တူခွင့်ပြုချက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အမြင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှ PU [7, 31, 32] နှင့်အတူဖို့ဆက်စပ်ပါပြီ။ ကြောင်းလိုင်းများတွင် "လူမှုရေးသရုပ်မှန်" နှင့် "utility ကို" အဖြစ်ခေါင်းစဉ်အဖြစ်အဓိကအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပေါ့ပေါ့ထက်ချစ်ခင်နှင့်ဆက်စပ်လိင်၏ Conceptual, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [59, 60] အကြားပိုမိုမြင့်မားသည်ထင်ရှား။ , အလားတူပင်ရွယ်တူချင်းဖိအားမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်မှာလည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် [59, 60] စဉ်အတွင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမှ PU မှထိတွေ့မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်, ဆယ်ကျော်သက်မှ PU အပေါ်သုတေသနပြုအကျိုးစီးပွားညီတစ်ဦးချင်းစီ, ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များပါဝင်သောဖော်ထုတ်သုံးခုအဓိကဒေသများအနှံ့ဖြန့်ဝေပုံပေါ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းအချက်များသိသိသာသာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမှ PU ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အသိပညာဖို့အထောက်အကူပြုမြင့်ဆုံးအကျိုးစီးပွားဆွဲဆောင်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာပိုမိုသုတေသနအလေးပေး Contextual နှင့်လှုပ်ရှားမှုမှ PU related အချက်များနှင့် ပတ်သက်. အလွန်အရေးကြီးသည်။ သုတေသန၏ဤအမျိုးအစားခေတ်ပြိုင်, ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ၏ကျယ်ပြန့်သောဧရိယာမှာစတင်မိတ်ဆက် Conceptual အဖြစ်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏လယ်ပြင်နှင့်အတူ align မယ်လို့နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဆယ်ကျော်သက် '' မိသားစုများ၏အရေးပါအခင်းအကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုချဉ်းကပ်အကြောင်းကြားနိုင်, ကျောင်းနှင့် အသိုင်းအဝိုင်း [76-78] ။
Your Brain on Porn ၏ အရောင်းရဆုံး စာရေးဆရာ Gary Wilson သည် လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်က ယနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ သူ့ကို သတိရမိပါသည်။ သူ့အလုပ်… t.co/BivdLtx006
"အင်တာနက် porn သည် ယနေ့ခေတ် ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည် checkers များမှ ဖြစ်သကဲ့သို့ တကယ့်လိင်နှင့် ကွဲပြားပါသည်။" - Gary Wilson Gary Wilson,... t.co/FWh2mqGaR8